Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Mey, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Mey, 2021
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Mey, 2021
Tiorkia 30 Mey 2021
Isan'ireo zavatra hita any amin'ny toerana fanariana fako any Tiorkia ireo fonon'entana avy amin'ny mpaninjara ao UK sy ireo fitaovana fitiliana 'antigen' COVID-19 avy nampiasaina.
Nahataitra ireo mpampiasa Twitch ny nahita ny Ben'ny Tanàna tao
Tiorkia 23 Mey 2021
Ny fisehoana voalohany nataon'i Ekrem İmamoğlu, Ben'ny Tanàna ao Istanbul sady mpikambana ao amin'ny antoko repoblikàna matanjaka amin'ny fanoherana, tao amin'ilay sehatra dia nifanandrify tamin'ny fety iray ao amin'ny firenena, nataony hankalazana ny tanora sy ny fanatanjaahantena
Tiorkia, fifaninanana henjana ho an'ny Netflix ny fisian'ilay lahatsary Youtube ana lehiben'ny Mafia
Anisan'ireo olona ambony lasibatr'ireo lahatsary Youtube nalefan'i Sedat Peker, ilay Tiorka lehiben'ny mafia mpanao heloka bevava voarindra, ny minisitry ny atitany sy ny vinantolahin'ny filoha Erdogan.
Israely 09 Mey 2021
Mety hanohintohia mivantana ireo olontsotra ao amin'ny Lemak'i Gaza sy ao Cisjordanie ny fiharatsian'ny toedraharaha politika ao Palestina.
Alzeria 08 Mey 2021
Iràna 02 Mey 2021
Niteraka resabe tamin'ny fampitam-baovao i Ali Kordan, Minisitry ny Atitany vaovao Iraniana, noho ny fanomezany diplaoma doctorat "sandoka" avy amin'ny oniversite Britanika malaza any Oxford.
Israely 01 Mey 2021
Tamin'ny voalohany, toa fanafihana maningana: tsy fetezana ivelan'ny fotoana sy toerana. Ny fanindroany, nofy ratsy izany. Ary nitranga indray ny fanintelony.